विदेशकै झल्को दिने काठमाडौंका सडकमा नयाँ सडकबत्ती, रातमा झनै रहर लाग्दो बन्दै काठमाडौँ शहर Kathmandu -
Home News विदेशकै झल्को दिने काठमाडौंका सडकमा नयाँ सडकबत्ती, रातमा झनै रहर लाग्दो बन्दै...
विदेशकै झल्को दिने काठमाडौंका सडकमा नयाँ सडकबत्ती, रातमा झनै रहर लाग्दो बन्दै काठमाडौँ शहर Kathmandu
पतिको दा’हसंस्कार सकिएको मात्र छ, का’जकिरिया सुरु मात्र भएको छ । उता पत्नी भने पतिका झ’गडियाको नाक जो’गाइदिन स्व’र्गीय पतिको भ’र्त्सना गर्छिन् । पतिलाई ना’नाभाँती आरोप लगाउँछिन् । सामान्यतया स्व’र्गवास भइसकेका मानिसलाई आ’रोप लगाइँदैन । झन्, स्वयं पत्नीले नै आ’रोप लगाउनु अस्वाभाविक हुन्छ । यस्तै अ’स्वाभाविक ह’र्कत भएको छ इन्द्रमाया तामाङबाट । कमानसिंह लामाको नि’धनपछि पत्नी इन्द्रमायाले यस्तै ह’र्कत गर्नुभएको छ ।अस्पतालको बेडबाट कमानसिंहले नारायणकाजी र इन्द्रमायाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुभयो ।
त्यो बेडबाट कमानसिंह न्याय खो’ज्न घर फर्कन पाउनुभएन, स्व’र्गवास हुनुभयो । स्व’र्गवास भए लगत्तै कमानसिंहको जीवन र व्यवहार उ’त्खनन् गर्न सुरु भयो । के पाइयो भने नारायणकाजी, उहाँकी नि’कट सुसन कर्माचार्य र पत्नी इन्द्रमायाका कारण कमानसिंहले द’र्दनाक जीवन भो’ग्नुपरेको रहेछ । नारायणकाजीको टि’मबाट अढाई करोड रुपैयाँको भारी कमानसिंहले बो’क्नुभएको रहेछ । त्यो भारी बि’साउन कमानसिंहले नारायणकाजीसँग गर्नुभएको संवाद्को अडियो भिडियो पनि सनराइज खबरले सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि नारायणकाजीलाई चो’ख्याउन र जो’गाउन इन्द्रमाया अगाडि सर्नुभएको हो ।
अ’स्वाभाविक विज्ञप्ति:इन्द्रमायाको विज्ञप्तिको सम्पूर्ण उद्देश्य उहाँकी स्व’र्गीय पति कमानसिंहका झ’गडिया नारायणकाजी र सुसनलाई चो’ख्याउने र जो’गाउने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ । यो प्रकरण उ’त्खनन् गर्ने सनराइज खबरले यस अघिका कुनै पनि समाचारमा कमानसिंहको फेसबुक स्टाटसमा लेखिएको एउटा द’र्दनाक प्रसंग उल्लेख गरेको छैन । त्यो प्रसंग हो– आफू म’रेपछि इन्द्रमायालाई म’लामी नआउनु भनेर लेखिएको प्रसंग । पति वि’योगको पी’डामा रहेकी महिलालाई अ’सर पर्ने गरी लेख्न हुँदैन भन्ने मा’नवीय दा’यित्ववोधका साथ सनराइज खबरले सो प्र’संग उल्लेख गरेको थिएन ।
तर, इन्द्रमायालाई पति वि’योगको पी’डा रहेनछ । बरु, स्व’र्गीय पतिका झ’गडियासँग मिलेर पतिलाई नै आ’रोप लगाउने काम उहाँबाट भयो । इन्द्रमायाले अलिकति पनि मा’नवीय सं’वेदना देखाउनुभएन । इन्द्रमायाको विज्ञप्तिमा कमानसिंहलाई विभिन्न आरोप लगाइएको छ । इन्द्रमाया आफैं पनि राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ । पतिले कु’ट्दापिट्दा उहाँ किन उ’जुर हाल्न जानुभएन ? किन हा’रगुहार गर्नुभएन ? सम्बन्धित तथा जि’म्मेवार ठाउँमा इन्द्रमायाले गु’हार लगाएको अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन ।पति कमानसिंहले भने नारायणकाजीसँग सम्बन्ध राखेर इन्द्रमायाले आफूलाई लु’टेको भनी नेकपाका नेताहरुलाई उ’जुर गर्नुभएको थियो ।
डु’बेको रकम फिर्ता ल्याउन नारायणकाजीसँगको संवाद् रेकर्ड समेत गर्नुभएको थियो । अर्थात्, ज्यूँदो हुँदा कमानसिंहले पत्नी इन्द्रमाया र नारायणकाजीको नि’कटताबारे जे भनेर फेसबुकमा लेख्नुभयो त्यो सत्य प्र’तीत हुन्छ । यद्यपी, उहाँहरुबीचको नि’कटता कुन खालको हो भन्ने छानविन पछि मात्र थाहा हुनसक्छ । तथापी, कमानसिंहको जीवन ब’र्बाद् पार्ने मा’मिलामा इन्द्रमाया र नारायणकाजीको मि’लेमतो धेरै ह’दसम्म प्रष्ट हुन्छ ।पतिको शो’कमा आँ’शु पु’छ्न छा’डेर नारायणकाजीको छ’वीमा लागेको दा’ग प’खाल्न इन्द्रमायालाई ह’तारो हुनु अ’र्थपूर्ण छ । यसको अर्थ के हो भन्ने पनि छानविन पछि मात्र थाहा हुनसक्छ ।
कलियुगकाे नमूना:सनराइज खबरले प्रकाशित गरेको अडियो भिडियोबाट के छ’र्लङग हुन्छ भने कमानसिंहको टा’उकोमा सुसन र नारायणकाजीको जोडीले अ’ढाई करोड रुपैयाँको भा’री बो’काइदिएको थियो । पतिको टा’उकोमा बो’काइएको त्यो भा’री नि’काल्नलाई इन्द्रमायाको यो’गदान हुनुपर्ने हो । तर, ठिक उ’ल्टो भएको छ । कमानसिंह दोषी, नारायणकाजी र सुसन चाहिँ नि’र्दाेष भनेर इन्द्रमायाले वि’ज्ञप्ति निकाल्नुभयो । इन्द्रमायाको वि’ज्ञप्तिलाई क’लियुगको ज्व’लन्त न’मूना भ’न्नेहरु धेरै छन् ।
का’जकिरिया पनि नसकिएका कमानसिंहलाई ब’दनाम बनाउने र क’ठघरामा उ’भिनुभएका नारायणकाजीको प्रशंसा गर्ने गरी इन्द्रमायाको जुन विज्ञप्ति आएको छ, यबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ– कमानसिंहले नारायणकाजी, इन्द्रमाया र सुसनबाट कति मा’नसिक या’तना भो’ग्नुभएको थियो भन्ने । कमानसिंहलाई कस्तो भु’मरीमा फ’साइएको थियो भन्ने इन्द्रमायाको वि’ज्ञप्तिले धेरै नै संकेत गर्छ ।म’रेका कमानसिंह उठेर बोल्न सक्नुहुन्न तर उहाँका झ’गडिया नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुसन कर्माचार्य र इन्द्रमाया भने बोलेको बो’ल्यै हुनुहुन्छ ।
विज्ञप्ति नै जा’री गरेर कमानसिंहलाई ला’न्छित गरिरहनुभएको छ । कमानसिंहको पक्षमा बो’लिदिने काम यो प्रकरणमा गरिने नि’ष्पक्ष र न्या’यिक छानविनले मात्र गरिदिन सक्छ । वास्तवमा निष्पक्ष छा’नविनकाे मा’ग इन्द्रमाया अ‌ाफैंले गर्नुपर्ने हाे । अ‌ाशा गराैं- उहाँले त्यस्ताे मा’ग राख्नने अ‌ाश गर्न सकिन्छ तर भर पर्न सकिने अवस्था भने दे’खिएन ।सनराइज खबर
Previous articleकमला घिमिरेलाई मिलन टमटाले दार्चुला भाँडा मजाउन लिन्छु भनेपछी भयो लफडा । Kmala_Milan
Next articleटिकटकमा भाईरल खिरपुरीवालीको घरमा पुग्दा खोलीन यस्तो रह्स्य – यसरी बनेको रहेछ भिडियो Khir Puri Wali